> Resource > Free > Top 5 Best Free Wmv Video Splitters
Marka wax kasta oo markii aad rabtid in aad ka gooyay ama kala qaybsan loox aad jeceshahay ka filim, waxaad u baahan tahay codsi hallayn karo oo aan dhaawici tayada video. Hoos waxaa ku qoran liiska ugu sareeya 5 splitters wmv lacag la'aan ah.
Windows Movie Uumahaaga codsiga lacag la'aan ah oo bixiya hawlaha kala duwan video tafatirka waxtar u leh dadka isticmaala daaqadaha. Sidaa daraadeed, waxaad video gacanta ku daatay iyo clips audio galay clips yar karaa in la sameeyo clips aad u fududahay in ay la shaqeeyaan. Waxa ay taageertaa qaabab video kala duwan sida wmv, MP4, MTS, M2T .AVI. MOV iyo in ka badan.
Miyuu versions kala duwan ee wax soo saarka la mid ah.
Movica waa il furan qalab video tafatir oo lacag la'aan ah. Waxa ay taageertaa qaabab kala duwan sida MPEG-1, MPEG2, wmv, MP3, AVI, OGG, regelingen iyo WMA. Movica kuu ogolaanaya in aad kala faylasha sida ay set duration ee, tirada xabbadood, ama xajmiga xabbadood shaqsi, kaas oo buuxiyay shuruudaha qaybsama kala duwan.
Hayso si loo soo dajiyo Windows Media Player on your computer.
HJSplit waa codsi ah in loo isticmaalo in aan kala tagno files movie weyn footage yar ee noocyada kala duwan ee qaabab. Barnaamijka ayaa laga heli karaa Windows, Linux iyo noocyo kala duwan oo dhufto ee kale. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud ayaa dillaaci kara faylasha aad qaybo ka size kasta oo aad rabto.
Taageerada dhowr dhufto;
Miyuu size yar oo kaliya 306KB;
Ma aha in aad si ay u rakibi.
Design ma aha mid soo jiidata.
Video qalabeed waa aalad tafatirka video online taas oo uu leeyahay set qani ku ah qalabka video. Si aad u isticmaasho qalabka video tafatirka, waa inaad diiwaan (waa lacag la'aan). Menu ayaa bidixda ku taxan dhammaan hawlaha. Goynta videos qaybo yaryar ku yimaado laba hababka "Simple" iyo "Advanced". Laakiin sida laga daadiyo badan oo online, Video qalabeed soo rogay xanibaada size of 300MB ah ee aad video files.
Cidhiidhyo tirada file aad si uun 300MB.
Factory Qaabka ma aha oo kaliya kasoo muuqday video iyo Converter audio, laakiin sidoo kale a video editor wanaagsan la hoosaad qalabka hayaana qaybsama file. Si aad u kala jabeen video ah, oo kaliya ay doortaan aad file video, dhigay duwan clip waqti ku bilaabatay iyo dhammaadka wakhtiga ka dibna aad si degdeg ah habka bilaabi kartaa.
Taageerada qaab video kala duwan.
Its 37.7 MB download size noqon kartaa weyn u ah hababka qaar ka mid ah.
Wondershare Video Editor waa barnaamij software wanaagsan video tafatirka labada Windows iyo Mac. Codsigan taageertaa il video files qaabab loo jecel yahay, sida wmv, MP4, AVI, MPEG, MOV, iyo sidoo kale qaar ka mid ah qaabab HD, sida MKV iyo AVCHD. Sidaa daraadeed, ma waxaad kala kaliya awoodo, laakiin sidoo kale jar jaray iyo video files. Kala duwanaanshaha u dhexeeya geedi socodka kuwa yar yar yihiin, laakiin waxaa fiican in loo haysto gudahood codsiga hal.